बाबुरामका बहुरुप - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
आइतवार, चैत्र २०, २०७३
- ज्ञानबहादुर क्षेत्री
चुनावको मुुखमा चुनाव हुन नदिने गरी सडक आन्दोलन ? रचनात्मक विरोधका नाममा सडक अवरुद्ध पारेर सर्वसाधारणलाई हैरानी दिने उही खुुइलिईसकेको भद्धा विरोध नौटंकी ? बस, भनाईमा नयाँ गराई र व्यवहारमा अरु दल जस्तै जनभावना बिपरित हर्कत गर्ने दल साबित हुुदैछ नयाँ शक्ति ।
शहरीया, वौद्धिक, प्राज्ञिक तथा अली सुविधा सम्पन्न वर्गका केही मानिसहरु डा. बाबुुराम भट्टराईलाई ठूलै आईकन संझने गर्छन । जनयुद्धका बेला उनको विद्धताको प्रशंसामा निकै राजनीतिक गसिपहरु टक अफ द टाउन बन्थे । माओवादीले जनयुद्धमा त्यो उचाई हासिल गर्नमा उनको वौद्धिक छबीको उच्च योगदान भनेर खुुबै स्याल हुुईया प्रचार पनि भयो । पहिलो माओवादी सरकारका अर्थमन्त्रीका रुपमा उनको छबी सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा रहेको पनि निकै प्रचार भयो । उनी आफै नेतृत्वको प्रधानमन्त्रीकाललाई गीता पाठ गर्ने वर्ग पनि यही समाजमा छ ।
तर यी सबै उनका समर्थनका गीतहरु भ्रम हुन र उनी आर्फैमा बाघको छाला ओढेका एक चतुरो ब्वासो चरित्रका राजनीतिज्ञ हुन भन्ने तथ्यवोध चाहि अरुले हैन डा. बाबुुरामकै जनभावना विरोधी र देशघाती चरित्र, चिन्तन व्यवहार र कामकुरो एकातिर कुुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्ने शैली र संस्कराले नै स्पष्ट पारिहहेको छ ।
अहिले देश संघीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय चुनाव सामना गर्ने आखिरी तयारीमा छ । तर त्यो चुनावको विपक्षमा सबैभन्दा चर्को स्वरमा विरोध गर्ने मोर्चाको नायकत्व गर्ने दौडमा अग्र भागमा उनै पात्र छन, डा. बाबुराम भट्टराई अर्थात नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई ।
पछिल्ला दिनमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो दललाई आँखा चुनाव चिन्ह नदिएकोमा उनको धेरै चर्को विरोध छ । उनको दल जस्तै समस्यामा परेका अन्य २ दर्जन दलले पनि उनलाई साथ दिएका छन । यसबारे निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीलाई नै ज्ञापन पत्र बुुझाएर उनीहरुले शसक्त विरोध पनि गरिसकेका छन ।
चैत्र २० को दिनाँकबाट नयाँ शक्ति सडक आन्दोलनमा पनि उत्रिसकेको छ । चुनावको मुुखमा चुनाव हुन नदिने गरी सडक आन्दोलन ? रचनात्मक विरोधका नाममा सडक अवरुद्ध पारेर सर्वसाधारणलाई हैरानी दिने उही खुुइलिईसकेको भद्धा विरोध नौटंकी ? बस, भनाईमा नयाँ गराई र व्यवहारमा अरु दल जस्तै जनभावना बिपरित हर्कत गर्ने दल साबित हुुदैछ नयाँ शक्ति । नयाँ शक्ति लगायतका साना र नयाँ दलहरुले दलीय चुनाव चिन्ह पाउने संभावना लगभग शून्य रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुुक्त अयोधिप्रससाद यादवले स्पष्ट पारिसकेका छन ।
कतिसम्म भने नयाँ शक्तिले दलीय चुनाव चिन्ह आँखा नपाए चुनावै हुन नदिनेसम्मको धम्की पनि नयाँ शक्तिका संयोजक , पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईबाट आएको छ । यस अघि भर्खरै तराई मधेश क्षेत्रमा हिमाल, पहाड, तराई अभियानका क्रममा उनै डा. बाुबुुरामले आफू उम्दा राष्टवादी भएको दाबी प्रश्तुुत गर्दै आफ्नो देशभक्तिको जाँचका लागि डिएनए परीक्षण गर्न समेत चुनौति दिएका थिए । तर देश चुनावी माहौलमा प्रवेश गरिसकेका कारण उनको डिएनए परीक्षण गर्ने देशभक्तिको चुनौति उतिसारो राजनीतिक बजारको हटकेक बनेन । महिना अघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमसंग ६ बुुँदे लिखित सहमति सहित कार्यगत एकताको घोषणा गरेर संविधान संसोधनको मुद्धा उछाल्ने मधेशी मोर्चाको कित्तामा पनि संघीय समाजवादीसंगै उभिएको उनको दल पछिल्ला दिनमा संघीय समाजवादीसंगै पार्टी एकताको हल्लाले पनि राजनीतिक बजारमा हल्लीखल्ली मच्चाउन खोज्दैछ ।
यसरी आगामी वैशाख ३१ मा २० वर्षपछि पहिलो पट्क हुन गैरहेको स्थानीय चुनावको मुखमा यो वा त्यो बहानामा डा. बाबुराम चुनाव सफल पार्ने भन्दा पनि असफल पार्ने चुनौति पात्रका रुपमा देखा परेको तथ्य उनका बहुुअर्थि भाषण, बेमौसमी र बेतुुकको र पार्टीका लाईनहरुले देखाईरहेको छ । चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुुबेर मरी भन्ने आख्यानको हालत बिर्साउने गरी एकातिर नयाँ शक्तिमा खिया पर्दै गएको छ भने अर्कोतिर पार्टीको खस्कदो शक्ति, प्रभाव र विचरा हालतले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा संयोजक भट्टराईलाई निकै चिडचिडाहट र वैचनी भएको उनका थरीथरीका अभिव्यक्तिले ईंगित गरिरहेका छन ।
उनले अरु विचारहरु जे जस्ता राखे पनि जनतालाई स्थानीय तहमा शक्तिशाली बनाउने र संघीय नेपालको जग बसाल्ने आगामी स्थानीय चुनावको भने विरोध गरेर उनी यो व्यवस्था र जनअधिकारको हननका खातिर नयाँ सिखण्डीका रुपमा देखा पर्दैछन । चुनाव भाँड्नुु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हो नयाँ शक्तिका लागि पनि भन्ने जान्दा जान्दै पनि चुनाव विरोधी हर्कतको पराकाष्ठ प्रदर्शनमा उत्रेका सिखण्डी चरित्रबाट सावधान हुनैपर्छ ।
के दल दर्ता मौका थिएनर उनलाई ?
सदा सुखी सन्तोषी, सदा दुखी अन्तोष ीभने जस्तै नेता हुन डा. बाबुुराम । उनलाई नयाँ संविधान अनुसार नयाँ दल निर्वाचन आयोगमा नयाँ ऐन नियम अनुसार दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने राम्रै हेक्का थियो । किन भने नयाँ संविधान अनुुसार नयाँ कानुुुनहरु बनेको कुरा के डा. बाबुराम र उनको नयाँ शक्तिका नेताहरुलाइ थाहा थिएन त ? तर समय छउन्जेल उनी संविधान विरोधी हर्कतमा मस्त र व्यस्त भए । अनि अन्तिममा के निहुुँ पाउ र चुुनाव बिथौलौं भनेर बिरालोले मुुसा ढुुके झैं चुुनावको विरोधको मौका कुुरिरहेका उनै दलले चुुुनावी चिन्ह नपाएको झोकमा मौकामा चौका हान्न कस्सिए । उनलाई साथ दिने अरु नांग्ले दलहरु पनि संगसंगै छन । उनीहरुका माग सही होलान, तर के यो निर्वाचन आयोगलाई घेरेर समस्या समाधान हुने समस्या हो त ? यो त बहाना खोजेर चुुनाव भाँड्ने षडयन्त्र मात्रै हो । कानुुुन बनाउने संसद अनि संसदले दिएको कानुुन पालना गर्ने निर्वाचन आयोग विरुद्धको डा. बाबुरामको दलको विरोध कुनै कारणले पनि सही हुुन सक्दैन । आम जनसाधारणले स्थानीय चुनावलाई मन, वचन र कर्मले स्वागत गरिरहेका बेलामा यो उनको चुनाव भाँड्ने दुुश्कर्म बाहेक केही हुनै सक्दैन ।
कुुनै पनि मुुल्यमा अब डा. बाबुुराम प्रवृत्तिको अब सफाई र बिदाई नै जनमैत्री राजनीतिको ओखती हो । भ्रम हुुन डा. बाबुराम प्रवृत्ति, अब तिनलाई चिनौं र बहिष्कार गरौं ।
अवसरवादी बिगत ः
नेपाली राजनीतिमा अवसरवादी चरित्रका पर्याप जस्तै रहेका डा. भट्टराईको राजनीतिक जीवन क्रान्तिकारीदेखि प्रजातन्त्रवादीसम्म, वौद्धिकदेखि मुख्याईको पराकाष्ठ चरित्रले भरीपूर्ण छ । जनयुद्धको आलोकमा हेर्दा १७ हजार बढी निर्दोष मानिसको अनाहकमा ज्यान लिने र हजारौंलाई युद्धको पीडावोध गराउने दशक लामो माओवादी जनयुद्धका दोस्रो शक्तिशाली कमाण्डर थिए डा. बाबुराम भट्टराई २०५२ देखि २०६२ सम्म । जनआन्दोलन २०६३ को सफलतासंगै जसै माओवादी शान्ति राजनीतिमा आयो, माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनका प्रचण्डका हाराहारीका नेता रहे उनै बाबुराम । पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा पनि नेपाल एकीकरणकत्र्ता पृथ्वी नारायण शाहको गृहनगर गोरखाबाट निर्वाचित माननीय रहे ।
दोस्रो संविधान सभाको परिकल्पना नै नगरिएको बेला पहिलो संविधान सभालाई बिना संविधान मृत्युलोकमा पुरयाउने सरकारका अन्तिम प्रधानमन्त्री उनै बाबुराम थिए । नेपलका मधेशी दलहरुरुको भारी प्रतिनिधित्व रहेको र निकै जम्वो तथा भ्रष्ट सरकारको कमाण्ड उनैले संहालेका थिए । सरकार प्रमुख हुदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाढीपीडितलाई राहत बाँड्न हिडेको सहन नसकेर जेल हाल्ने उर्दी जारी गर्नेदेखि देशको चावी अन्तै कतै अर्थात दक्षिणतिर रहेछ भनेर सगर्व भन्ने पनि उनै तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुुराम नै थिए ।
जसले जतिसुकै पक्ष लिए पनि बचाऊ गरे पनि वर्तमान संविधानको सर्वस्वीकार्यता पर्याप्त नहुनुु र यो विवादाष्पद देखिनुुमा डा. बाबुराम भट्टराईले नायकत्वको भुुमिका निभाएका छन । दोस्रो संविधान सभाले त्रुटीपूर्ण संविधान जारी गरेको पहिलो घोषणा उनै बाबबुरामले गरे, जो संविधान निर्माण्का बेला संविधान सभा सरह शक्तिशाली राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए । उनकै समितिले तयार गरेको संविधान संविधान सभाले घोषणा गरेको हो । २०७२ असोज ३ गते तत्कालिन राष्टपति डा. रामवरण यादवले संविधान सभाभित्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गर्दै गर्दा मुल गेटमा निस्केर त्यही संविधानको धुवाँधार विरोध गर्ने र लगत्तै संविधान जलाउदै मधेश पसेका नेता पनि उनै डा. बाबुराम थिए । माओवादी शान्ति राजनीतिमा फर्केसंगै माओवादीको प्रजातान्त्रिकरणको एकल ठेकेदार बनेका पनि उनै बाबुराम हुन ।
जनयुद्धको दशकले देशलाई सही बाटोमा ल्यायो की देशलाई एक युुग पछाडि धकेल्यो भन्ने बहस नेपाली समाजमा भैरहेकै छ । माओवादीले जति नै बचाऊ गरे पनि जनयुद्धले देशलाई अधोगतिमा धकेलेकै हो । माओवादी परिभाषको जनयुद्धलाई लालक्रान्तिको संघर्ष ईतिहास नै मानिदिदा पनि त्यो ईतिहासलाई उक्साउने र अन्ततः धोका दिने अवसरवादी खलनायक हुन डा. बाबुराम । जसै अघिल्लो बर्षसम्म माओवादीको आरोलो लागेको हरिणको चाल थियो, तब उनै बाबुराम माओवादीलाई रातो स्टीकर लागेको जोखिमयुक्त घरको संज्ञा दिदै माओवादीबाट अलग भए, सभाषद पदबाट पनि राजीनामा दिए ।अघिल्लो वर्ष उनले आफ्नो दशकौं लामो लालक्रान्तिको राजनीतिक जीनमा पनि १८० डिग्रीको परिवर्तन ल्याए ।
नयाँ शक्ति नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी
एक अवसवादी राजनीतिज्ञ डा. बाबुुरामले ५ दशक लामो माओवादी छबीमा पूर्णबिराम लगाएर सयौं मुसा खाएपछि बिरालो हज गर्न मक्का गएजस्तै गरेर नयाँ शक्ति नामक नयाँ प्रजातन्त्रवादी दलको स्थापना गरे पनि त्यो उनको छलांग केवल नयाँ बोतलमा पुुरानो रक्सी शिवाय केही हुन सकेन । माओवादी छोडे लगत्तै नेपालमा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको स्रोत आफू बन्ने उदघोषका साथ उनले खोले नयाँ शक्ति नामक नयाँ दल । केही विचार नेकपा एमालेका नविन विचारक जननेता मदन भण्डारीका र केही विचार नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुुरुष जननायक विपी कोईरालाका सापटी लिदै उनले भव्य उदघाटन समारोहका वीच नयाँ पार्टीको गठन गरे ।
पार्टी एक वर्षको पनि हुदा नहुदै त्यसमा गुट, उपगुुट र फुटको श्रृखला सुुरु भो । मुुमाराम खनाल, रामेश्वर खनालदेखि निर्मल भट्टराईहरुसम्मको समुहमा आईपुुग्दा डा. बाबुराम भट्टराईको दल नयाँ शक्ति पूर्व असंतुुष्ट माओवादीका नेता कार्यकत्र्ताको कुण्ठाको छहारी र तिनै पूर्व माओवादी गुटहरुको महासंघ जस्तो भएको छ भनेर अरुले हैन त्यहाबाट फित्र्ता भएका खनाल र भट्टराईहरुले नै सप्रमाण भनिरहेका छन ।
ओखती बाबुराम सफायाः
नेपाली राजनीतिमा कथित विद्धता र इमान तथा संघर्षका नक्कली पुुलिन्दाबाट उदाएका डा. बाबुुराम समुल झुुट हुन । उनको पढ्नपाठन, लालनपालन र सबै स्रोतसाधनको जोहो नयाँ दिल्लीकै सौजन्यमा भएको तथ्य आम नेपालीलाई थाहा छ । उनी जे जति चुनाव विरोधी हर्कत गर्दैछन, ती दिल्लीको नेपाली राजनीतिमा डा. बाबुुरामको आवरणमा भैरहेक ाझेल्लीहरु नै हुन । अब डा. बाबुराम प्रवृक्तिमुक्त नेपाली दल र राजनीति मात्रै यस्ता अवसरवादी नक्कली रमजनीतिक चरित्रको समाप्तीको ओखती हो । त्यसैले चुनावमा भाग लिए चुनावबाटै, चुनावमा भाग नलिएमा जस्तालाई तस्तै गरेर जनताले यस्ता सिखण्डी खलनायक डा. बाबुराम चरित्र रर प्रवृत्तिलाई जनताले सफाया गर्नुपर्छ ।
नत्र यस्ताका भ्रमले राजनीति अरु संक्रमणतिर जान्छ भने देश र जनताले थप दुुख पाउनेछन । कुुनै पनि मुुल्यमा अब डा. बाबुुराम प्रवृत्तिको अब सफाई र बिदाई नै जनमैत्री राजनीतिको ओखती हो । भ्रम हुुन डा. बाबुराम प्रवृत्ति, अब तिनलाई चिनौं र बहिष्कार गरौं । सिंहदरबारलाई ७४४ स्थानीय तहमा स्थानान्तर गर्ने पहिलो स्थानीय तह चुनाव सफलताका बाधक डा. बाबुुराम प्रवृत्तिको अन्त्यमा नै हुनेछ चुनाव सफल, हुनेछ संविधान कार्यान्वयन र बढ्ने छ संविधानको सर्वस्वीकार्यता । त्यसैले बाईबाई गरौ डा बाबुराम चरित्र र प्रवृत्तिलाई सधैभरी ।